Ahoana no ahafahako mamorona filaminana ao am-baravaran'ny zanako?
Torohevitra ho an'ny garderina iray milamina
Ampidiro ny ankizy rehefa manadio
Tazony ny baiko
Ny fanamboarana ny filaminana ao am-bavahadin'ny ankizy dia sarotra. Vitsy ny akanjo, nefa be dia be. Satria mihalehibe ny ankizy ary mila zavatra vaovao. Ankoatra izany, ny ankizy dia mbola mila mianatra hoe nahoana no zava-dehibe sy manan-danja ny fanadiovana tsy tapaka. Saingy miaraka amin'ny fanatrehana tsara sy ny fanampian'ny ankizy dia azonao atao ny mitandrina tsara ny solaitrabe.
Mankafy ao am-patana
Alohan'ny ahafahanao manomboka mamorona ny baiko, tokony alao aloha ny fitoeran-tsakafo.
Arovy ny gara ao amin'ny garderie
Izay rehetra tsy mila na tsy tia intsony dia nesorina. Misy fomba maro ahafahana manatsara sy manadio ny kabinetra.
Ohatra, amin'ny fomba fametrahana 3, dia mamaritra ny akanjo rehetra ao anaty tahiry misy soratra hoe "Mijanòna", "Useful", ary "Mialà eo." Azonao atao ny manapa-kevitra raha te hivarotra, handefa, hanary na hanary ny akanjo voavoatra ao amin'ny fanangonana tranainy.
Na dia mety hiteraka korontana kokoa aza io fomba io amin'ny voalohany, dia ahafahana manavao tanteraka ny ao anatin'ny garderobe. Azonao ampiasaina ihany koa ny fotoana hanafoanana ny fitoeran-tsakafo.
Ny paikady mahomby hialana amin'ny korontana dia tsy mamela izany hitranga. Mazava ho azy fa sarotra amin'ny ankizy izany. Izany no antony tokony hisorohana ny votoatin'ny trano fisaka mba hahatonga ny ankizy ho sariaka sy azo ampiharina, ka ny toerana rehetra dia manana ny toerany:
Arotsaho amin'ny karazany ny akanjo ary amboary ny paosiny ao anaty paosy, T-shirt amin'ny hafa.
Ohatra, ampiasao ireo boaty samihafa mba hitahiry kiraro, pesta, kitapo na fandroana fandroana. Mba hahamora kokoa ny tenanao sy ny ankizy dia azonao atao ny manisy azy ireo.
Ny singa amin'ny ririnina izay tsy ilaina mandritra ny fahavaratra sy ny mifamadika dia azo alamina ao anaty boaty mihidy na ao anaty kapoaka. Noho izany dia voaro amin'ny fiompiana masaka ihany koa izy ireo.
Ho an'ny akanjo izay efa tratra nefa tsy mila hosasana, afaka mamorona sehatra miavaka ianao. Ohatra, amin'ny endriky ny seza iray, fitaterana fitafiana na fantsona maromaro ao amin'ny faritry ny rindrina na rindrina. Afaka atao indray ny akanjo indray ny ampitson'iny na averina any amin'ny fitoeran-tsakafo.
Nomena baoritra fanasan-damba ao amin'ny garderie ihany koa. Ny faritra matevina dia tsy mendrika ny manodidina.
Indrindra fa ny ankizy madinika dia mila mianatra ny fomba fitazonana ny filaminana. Amin'ny maha ray aman-dreny anao dia afaka manohana ny zanakao ianao. Ny ray aman-dreny dia modely foana, eny fa na dia miala sasatra aza. Zava-dehibe ho an'ny ankizy ny hiaina lamina fototra iray. Ny vokatr'izany sy ny hafatra mazava dia tena manan-danja tokoa na dia any am-pianarana aza, mba hahafantaran'ny ankizy tsara ny tokony hatao.
Mba hahafahan'ny jiro mitazona ny filaharany ao anatin'ny efitranony, tsy maintsy afaka manatratra ny votoatiny izy ireo. Ny akanjo izay ilaina isan'andro, dia tsy tokony ho ao anaty ranom-potsy. Miaraka amin'ny tombo-tsoavaly amin'ny haben'ny ankizy, dia afaka mandamina tsara kokoa ireo ankizy kely. Mora kokoa amin'izy ireo ny manantona akanjo sy jirofo. Misy koa rafitra cabinet izay natao manokana ho an'ny ankizy sy ny haben'izy ireo.
Raha vao misy filaminana iray eo amin'ny toerany, dia mora ho an'ny ankizy ny mihazona izany. Satria afaka misarika ny tenany amin'ny rafitra efa napetraka ao amin'ny governemanta izy ireo. Ny fitazomana ny zavatra voalamina dia dingana mitohy. Mivoatra sy mihombo haingana ny ankizy, ka mila fitafiana vaovao amin'ny fotoana fohy.
Noho izany dia ilaina ny mametraka fitsipika ho diovina, ohatra amin'ny andro voafaritra iray izay hanadiovana ny fanaka. Ankoatra izany, tahaka ny 5-S fomba dia manolo-kevitra ny mampihemotra ny sarin'ny rafitra tonga lafatra rehefa mivoaka, manamboatra sy manadio ny trano fidiovana. Ny ankizy dia afaka mifantoka amin'izany, raha toa ka manadio ny tenany izy ireo.
Ny anjara asan'ny raibe sy renibe | Fampianarana an-trano
Mandehana ankizy, ataovy madio ny trano! | fampianarana
Rehefa mamaky zavatra ny ankizy | fampianarana
Zazakely manan-talenta | fampianarana